२०७८ श्रावण ३२ सोमबार १८:१८:००
दुई दशक पहिले घरअगाडिबाट सडकको ट्रयाक खुल्यो। तत्कालीन कृषि सडकको रूपमा निर्माण भएको सडक केही वर्षमा नै मध्यपहाडी लोकमार्गको रूपमा विकसित भयो। घरअगाडिको सडकमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका गाडी गुड्ने गरी मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सुरु भयो।
लोकमार्ग नै बन्ने भएपछि चिल्लो बाटोमा सरर गाडी गुड्ने परिकल्पना गरेका थिए बाग्लुङ नगरपालिका– ३ खहरेका जंगबहादुर कार्कीले। तर, कार्कीको परिकल्पना दुई दशकसम्म पनि पूरा भएको छैन। घरअगाडिको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बर्खामा हिलाम्य, हिउँदमा धुलाम्य हुन्छ।
‘पूर्व–पश्चिम गाडी गुड्ने सडक घरअगाडिबाट गएको छ यो त गर्व को विषय हो,’ कार्कीले भने, ‘सडक आएको २२ वर्ष पुग्न लाग्यो। कालोपत्र हुने भनेकोसमेत १० वर्ष बित्न लाग्यो। बर्खामा हिलोले टेक्नै नमिल्ने हुन्छ, हिउँदमा धुलोले घर नै सेताम्य हुन्छ।’ बर्खाको समयमा घरअगाडि नै दैनिकजसो मोटरसाइकलहरू चिप्लिएर उठाउनुपर्ने कार्की बताउँछन्।
लोकमार्गको बाग्लुङ–घोडाबाँधे खण्डमा बर्खामा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुँदा यात्रु र चालकले मात्र हाेइन, सडकवरिपरिका स्थानीयसमेत सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्। वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोको समस्या झैल्दै आएका स्थानीयवासीले लोकमार्ग छिटो कालोपत्रे गर्न माग गर्दै आएका छन्।
जोखिम मोलेर यात्रा गर्न विवश
बाग्लुङ सदरमुकामदेखि घोडाबाँधेसम्मको २५ किलोमिटर सडकमा यात्रु र चालकहरू जोखिम मोलेर सवारी चढ्न र चलाउन विवश छन्। अघिल्लो वर्ष नै सडक कालेपत्रे सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले सयममा काम नगर्दा सडक कालोपत्रेको काम अलपत्र अवस्थामा परेको छ। निर्माण सुरु भएको दुई दशक बित्दा पनि लोकमार्गको यो खण्डमा सधैँको सास्ती खेप्नुपरेको छ। यसै वर्ष मात्र बिहुँ खण्डमा दुई किलोमिटर कालोपत्रे भएको सडकको बाँकी भाग जीर्ण र हिलाम्मे छ।
१७ सय ८६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको लोकमार्गको सबैभन्दा बढी बाग्लुङ खण्डमा नै एक सय ३४ किलोमिटर पर्छ। त्यसमध्ये घोडाबाँधेदेखि निसीको भलकोटसम्मको एक सय नाै किलोमिटरको बीचमा बुर्तिबाङ–निसीखण्डमा सात किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ भने अन्य सबै कालोपत्रे भइसकेको छ। ग्रामीण क्षेत्रको सडक समयमा नै कालोपत्रे भइसक्दा सदरमुकाम क्षेत्रको सडक कालोपत्रेमा भएको ढिलाइप्रति जनगुनासो पनि निकै बढेको छ।
डेढ घन्टामा ६७ किलाेमिटर यात्रा गर्ने सवारीलाई २५ किलाेमिटर यात्रा गर्न दुई घन्टा
बुर्तिबाङबाट ६७ किलोमिटरको घोडाबाँधेसम्म डेढ घन्टामै आउने सवारीलाई बाग्लुङ सदरमुकामसम्मको बाँकी २५ किलोमिटर दूरी पार गर्न झन्डै दुई घन्टा लाग्छ। लोकमार्गको बाग्लुङ खण्डको अधिकांश भाग कालोपत्रे भइसक्दासमेत सुगम मानिने जिल्ला सदरमुकाम नजिकै लोकमार्ग अलपत्र अवस्थामा छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कालोपत्रे भइसक्दा सदरमुकाम तर्फकै सडकको दुर्दशा हुनु अशोभनीय विषय बनेको यात्रुहरू बताउँछन्।
दुई दशकदेखि बर्खामा हिलाम्मे हिउँदमा धुलाम्मे सडक छिचोल्दै हिँड्न निकै सास्ती खेप्नुपरेको जिपचालक चक्रबहादुर घर्ती बताउँछन्। ‘सडक हिलाम्य छ। दर्जनौँ ठाउँमा खाल्टा परेका छन्। माथिबाट पहिलो खस्छ कि भन्ने डर छ। जोखिम उठाएर गाडी चलाउनुपर्छ,’ घर्तीले भने, ‘हिउँदमा धुलोले गाडीमा सवार यात्रु नचिनिने हुन्छन्, बर्खामा हिलोले। यस्तो सास्ती कहिलेसम्म भोग्ने हो ? हिलो सडक छ त्यसैमाथि गाडी फस्छ। यात्रु र चालक दुवैले सास्ती खेप्नुपरेको छ। घोडाबाँधेबाट सदरमुकाम बाग्लुङ बजार निस्कन निकै गाह्रो परेको छ।’ सडकमा खाल्टाखुल्टी धेरै भएका कारण वेलावेलामा गाडी फस्ने समस्याले पनि सताएको उनी गुनासो गर्छन्। ज्यानकै जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको चालक घर्तीको भनाइ छ।
बोक्सेको पहिरो सधैँको बाधक
वर्षायाममा मात्र लोकमार्गको दर्जनौँ ठाउँमा पहिरो जाने गरेको छ। तत्काल पहिरो पन्छाएर सवारी चलाउने गरिए पनि लोकमार्गको बोक्सेको पहिरोले भने धेरैजसो सताउने गरेको छ। बोक्सेमा पानी पर्दा मात्र नभएर सुक्खा पहिरो पनि खस्ने गरेको छ। तल बस्ती र खेतीयोग्य जमिन छ। बाग्लुङ बजारमा ल्याइएको खानेपानीको पाइपलाइन छ। माथिबाट आएको पहिरो बस्ती भएका कारण तल फाल्न मिल्दैन। टिपरमा उठाएर अन्यत्र लैजानुपर्दा पहिरो हटाउनका लागि कठिनाइ हुने गरेको छ। यो पहिरो लोकमार्गका लागि सधैँको बाधक बनेको छ ।
आगामी मंसिरसम्ममा कालोपत्रे हुन्छ
घोडाबाँधे–बाग्लुङखण्डको २५ किलाेमिटरमध्ये यस वर्ष बिहुँ खण्डमा दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको र अन्य ठाउँमा कालोपत्रेका लागि केही ग्राभेल राख्ने काम भई रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका योजना प्रमुख ई. मेघराज मरासिनी बताउँछन् । सडकको केही स्थानमा नाली बनाउने काम भइरहेको र निर्माण कम्पनीले आगामी मंसिरसम्म काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए। अघिल्लो चैत्रमा जेठ मसान्तसम्म सक्ने गरी प्रशासन र सरोकारवालासँग प्रतिबद्धता गरे पनि कोरोनाका कारण र छिटो वर्षा सुरु हुँदा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेको मरासिनीले बताए। ‘निर्माण कम्पनीलाई लगाम लगाएका छौँ, उनीहरूले पछाडि फर्कने अवस्था छैन। कुनै पनि बाहाना बनाउन पाउँदैनन्,’ आयोजना प्रमुख मरासिनीले भने, ‘वर्षा रोकिएको दुईदेखि तीन महिनामा कालोपत्रेको काम सकिन्छ।
सदरमुकामदेखि बिहुँसम्मको १३ किलाेमिटरको कालोपत्रेको जिम्मा ‘सिद्धिसाई कन्स्ट्रक्सन’ र बाँकी घोडाबाँधेसम्मको खण्ड निर्माणको जिम्मा ‘सूर्य कन्स्ट्रक्सन’ले लिएको आयोजनाले जनाएको छ। यस सडकखण्डको ०७६ कात्तिक मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ सालमा सम्झौता भएको थियो। सो अवधिमा सम्पन्न नभएपछि ठेकेदारले पहुँचको भरमा पटकपटक म्याद थप गर्दै आएका थिए। कालोपत्रेका लागि काम सुरु भएको पाँच वर्षमा हालसम्म ५५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख मरासिनीले बताए। ‘कालोपत्रे हुनुभन्दा पहिला नाली, वाललगायतका थुप्रै काम हुने गर्छ,’ मसासिनीले भने, अधिकांश काम सकिएका छन्। केही ठाउँमा त ग्राभेल पनि गरेका छन्। बाँकी ग्राभेल र कालोपत्रेको काम आगामी मंसिर मसान्तसम्ममा निर्माण कम्पनीले सक्छौँ भनेका छन्। कार्यालयले नियमित फलोअप गरिरहेको छ।’
नेपालको पहाडी क्षेत्र हुँदै पूर्व–पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गले बाग्लुङको बीचबाट गएको छ । पूर्वमा पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म जोड्ने नेपाल सरकारको गौरवको आयोजना हो।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक आदि समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने अभिप्रायले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गरिएको हो। तराईका जिल्लाहरू समेटेर निर्माण गरिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गजस्तै वैकल्पिक मार्गको रूपमा यो लोकमार्ग नेपाल सरकारले गौरवको योजनामा राखेको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्वत खण्ड सञ्चालनमा आउन अझै तीन दिन लाग्ने